WHD Series ọkasị mma bead Mill
WSD Series Fast Flow Aja Mill
WSH Series High-viscosity Vetikal bead Mill
WSJ Series kwụ Inter-obi jụrụ Full Function bead Mill
WSK Series High-viscosity ọkasị mma vasatail bead Mill
WSS usoro kwụ Aja Mill
WST Series Turbo Nano Aja Mill
WSV Series Vetikal Inter-obi jụrụ Bipyramid bead Mill
WSZ Series Inter-obi jụrụ elu-viscosity kwụ bead Mill
Atọ ala Mill Series
DYS Series Hydraulic Three ala Mill
FYS Series Hydraulic ise ala Mill
SG / S Series Three ala Mill
Sq / JRS Series Three ala Mill
Ọkasị mma kpọmkwem Three ala Mill
TYS Series Hydraulic Abụọ ala Mill
YS / YSS Series Hydraulic Three ala Mill
YSP / YSH Series Hydraulic Three ala Mill
High viscosity igwekota
LS / GJD Series nkata egweri Mill / Emulsifier
LXDLH Series Na Power igwekota
LXQLF Series enwekwukwa Multi-ọrụ Triple aro igwekota
LXQLF Series Multi-ọrụ Triple aro igwekota
LXXJB Series Na igwekota
Low viscosity igwekota
DSJ / SZJ Butterfly igwekota
Efere Ugboro abụọ Roll Machine
Energy Azọpụta agụụ oven
LHX Series homogeneous emulsion mgbapụta
Ụlọ nyocha n'ọtụtụ bead Mill
Ụlọ nyocha n'ọtụtụ Three ala Mill
Nano ihe mmiri egweri ngwaahịa akara
Chocolate, ahụekere, ukpa, Camellia nkpuru, Guar chịngọm ngwaahịa akara
mkpuchi / ahịa ọgwụ pesticide / ọkụkụ ngwaahịa akara
Kọmputa slurry ngwaahịa akara
Gravure ink akpaka ngwaahịa akara
High arụmọrụ ink dee ngwaahịa akara
High viscosity ink (dechapụ, UV dechapụ, Silk ebi akwụkwọ) ngwaahịa akara
Food & Health ngwaahịa
Ink & dai
Ink bụ ụdị tapawa ngwakọta nke pigments, ịkọ elekọta mmadụ (resin mmanụ), nwekwara ndị dị otú ahụ dị ka diluent na mmiri mmiri paraffin dispersions. Ọ nwere ike na e biri ebi na a dịgasị iche iche nke ihe ndị dị ka katọn, akwụkwọ, metal foil, plastic, metal, akpụkpọ site a ígwè obibi akwụkwọ. The shapes ndị a mkpụrụ ihe nwere ike ịbụ ewepụghị, cylindrical, wdg Ma ihe ndị mejupụtara nke ink na-adabere na-ebi akwụkwọ na usoro na ihe onwunwe nke mkpụrụ.
Dị ka ụdị ígwè obibi akwụkwọ efere. Ink nwere ike kere n'ime 4 iche iche:
1.Lithographic ebi akwụkwọ ink
Ọ bụ a n'ozuzu aha dị iche iche na ink adabara lithographic obibi akwụkwọ. The elu nke a lithography ndị nwere ihu ọma na ụgbọelu. The ụkpụrụ ebe bụ oleophilic na-abụghị ụkpụrụ ebe bụ hydrophilic. Obibi na-dabeere na ụkpụrụ na mmanụ na mmiri ichughachiazu ọ bụla ọzọ. Ya mere, lithographic ink ga-enwe mmiri na-eguzogide. Common lithographic ebi akwụkwọ ink tinyere dechapụ ebi akwụkwọ ink, elu gloss dechapụ ink, resinous dechapụ ink, web-nri-dechapụ ink, mpempe akwụkwọ-nri dechapụ ink, anọ na agba usoro dechapụ ink, ngwa-set dechapụ ink, dechapụ tin-ebi akwụkwọ ink, nwoke ịga ụlọ ọgwụ eguzogide dechapụ tin-ígwè obibi akwụkwọ ink na collotype ebi akwụkwọ ink.
Ọ bụ n'ozuzu aha dị iche iche na ink eji na letterpress ebi akwụkwọ ụzọ. Ọ tumadi tinyere ink eji na akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ, foto, ego, wdg The ikpehe letterpress ink bụ na ink nke ebi akwụkwọ efere na-protruding si akụkụ enweghị ink. Common letterpress ink tinyere letterpress ink maka mbipụta, letterpress agba ink, rotary letterpress ink maka mbipụta, rotary letterpress ozi ọma ink, rotary letterpress agba ozi ọma ink, ọla kọpa efere ebi akwụkwọ ink, letterpress ebi akwụkwọ ink maka plastic fim na flexographic ebi akwụkwọ ink.
3.Gravure ebi akwụkwọ ink
Ọ bụ n'ozuzu aha dị iche iche na ink eji na gravure ebi akwụkwọ ụzọ. Mgbe a malitere ibi akwụkwọ, na recessed ụkpụrụ ebe nke efere na-inked mgbe ekpopụ na ink si na-abụghị ụkpụrụ ebe. Ọ nwere ike na-ekewa kanyere gravure ink na foto gravure ink. Common gravure ebi akwụkwọ ink tinyere soft nkwakọ ink, sịga wrapping ink na katọn ebi akwụkwọ ink.
4.Mesh ebi akwụkwọ ink
Ọ bụ n'ozuzu aha dị iche iche na ink eji na ntupu-ebi akwụkwọ ụzọ na ọtụtụ-eji akwa-ebi akwụkwọ, plastic-ebi akwụkwọ, metal obibi, seramiiki-ebi akwụkwọ, iko-ebi akwụkwọ, electronic ngwaahịa-ebi akwụkwọ na lọtrị obibi, wdg Common ntupu-ebi akwụkwọ ink gụnyere akwụkwọ ihuenyo ebi akwụkwọ ink , plastic ihuenyo ebi akwụkwọ ink, ákwà na ihuenyo-ebi akwụkwọ ink, iko ihuenyo ebi akwụkwọ ink, seramiiki ihuenyo ebi akwụkwọ ink, obodo ihicha mgbaze ink, wdg
Changzhou Longxin ka ebere ye ọtụtụ ama anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ink rụpụta tinyere TOYO ink, DIC ink, DUBUIT ink na na. Anyị igwe na-exported na United States, Brazil, India, Russia, Japan, Korea, Singapore, Southeast Asia na mba ndị ọzọ na mpaghara, na-ekpori elu aha si n'agbụrụ dị iche iche nke ndụ. Longxin nwere asọpụrụ Vice onyeisi oche Unit nke Chinese ink dee Association na bụ mgbe onye ndú nke ọhụrụ na mgbanwe na ọrụ a. E wezụga, anyị nwere ike chepụta ma wughachi dum ngwaahịa akara na otu igwe dị ka ndị ahịa na-arịọ arịrịọ. Anyị ga-enye nke kacha mma mma na ọrụ gị.
Nwere ike ikwu ngwá maka ink mmepụta: DS usoro ọkasị mma kpọmkwem atọ ala na nkume igwe nri, YS usoro haịdrọlik atọ ala na nkume igwe nri, WSJ usoro kwụ esịtidem-obi jụrụ full ọrụ bead na nkume igwe nri, WSD usoro ngwa ngwa eruba ájá na nkume igwe nri, WSS usoro kwụ ájá na nkume igwe nri, WSK usoro High-viscosity ọkasị mma vasatail bead na nkume igwe nri
Product Line: High arụmọrụ ink ngwaahịa akara, Gravure ink akpaka ngwaahịa akara, High-viscosity ink (dechapụ, UV dechapụ, silk ebi akwụkwọ) ngwaahịa akara
Ekwentị: + 86-15061651688
Ekwentị: + 86-18248826257